Egwu - NDỊ IGBO KWENU
N’ime ‘ghetto’ ndị mmadụ n’ekelekwa Chukwu abiama. Phyno na Olamide emeputal...
Samsong na Chioma Jesus achikọtala aka tiputa ofu egwu ụka ha kpọrọ “Odogwu”. muta otu e...
Ọ bụrụ na ị n’achọ egwu ị ga eji nye Chukwu otito n’ime afọ a, lee ya ebe a. Frank Edwar...
Ebezina – Preye
“Ebezina Chukwu Nonso” bụ okwu Preye n’agwa ndi n’eso ya. Kirie nkiri egwu ụ...
“Ka anyị mụọ mkpuruedemede igbo” bụ akwụkwọ ọma emepụtara iji kuziere ụmụaka igbo asụsụ igbo. Ọ bụ akwụkwọ esemese. ụmụaka g’ewe ọmalịcha akwụkwọ a ga-amụta ụfọdụ aha ụmụanụmanụ, aha ihe eji ebi n’ụlọ na ụfọdụ ihe eji esi nri. Ha ga-amụtakwa aha ndị mepụtara ezinụlọ ma mụtakwa ọnụọgụgụ. Akwụkwọ a ...
Amaghimo – Password
Gee egwu ọhụrụ a nti.. Onye guru ya bụ Password. ọmalicha egwu ụka o tiputara bu otu n’ime ọtụtụ egwu ọhụrụ ọ guru n’afọ a.
Golibe – Flavour N’abania
Flavour emeputago nkiri “Golibe”, otu egwu ọ guru n’ime abom ọhụrụ ya “Thankful”. Clarence Peters bu onye meputara nkiri egwu a. Umu igbo n’eme ihe nkiri ama-ama dịka Pete Edochie, Anna Ebiere na ọtụtụ ndị ọzọ nọ n’ime ya. Egwu a amaka
Ọ bụrụ na ị n’achọ egwu ị ga eji nye Chukwu otito n’ime afọ a, lee ya ebe a. Frank Edwards na Sinach etiputago egwu ụka ọhụrụ ha kpọrọ “Idi Ebube”. Kirie nkiri dị na mgbada ọbụrụ na ị chọrọ imuta otu e si guọ ya.
“Ebezina Chukwu Nonso” bụ okwu Preye n’agwa ndi n’eso ya. Kirie nkiri egwu ụka ọhụrụ Preye tiputara. Onye enyemaka na mmepụta nkiri a bụ Akin Alabi.
Ife Di Mma – Tony Oneweek & 2Face
“Ife di nma” bụ aha egwu ọhụrụ Tony Oneweek na 2Face tiputara. Masterkraft bụ onye mepụtara uda egwu a. Capital Hill’s Clarence Peters bụ onye mepụtara nkiri ya.
Beautiful Onyinye – P-Square ft. Rick Ross
PSquare, umunwanne abuo n’eti egwu emepụtago nkiri egwu ọhụrụ ha tiri. Mana kita onye isi Maybach Music Group na Amerika, Rick Ross na onye isi Konvict Muzik, Akon sonyere aka na mmeghari egwu a.
Zoro etipụtago egwu ọzọ ọ kpọrọ “Otu”. Zoro bụ ezigbo nwa-afọ igbo n’eji asụsụ igbo eti egwu. ọtụtụ ndi mmadu n’akpọ ya Phyno ọhụrụ.
Oh Baby – Chidinma ft Flavour N’abania
Chidinma emeputagon nkiri egwu ya na Flavour N’abania guru.
Original Boy – Isekweri
‘Isekweri’ bu aha egwu ohuru Original Boy tiputara. Original Boy bu onye egwu no na P-CREW Records. Ezigbo aha ya bu Okechukwu Paul Junior. Ndi nyere aka n’imeputa nkiri egwu-a bu Torch Entertainment ND. Kirie nkiri egwu Original Boy ebea. Original Boy – Isekweri